Voina teny an-dalana :: Maty voatsindrona antsy ilay vavitokan’ny ray aman-dreniny • AoRaha
Voina teny an-dalana Maty voatsindrona antsy ilay vavitokan’ny ray aman-dreniny
Namoy ny ainy noho ny tsindron’antsy nahazo azy Ramasiarimanana Sheena, vehivavy, roa amby telopolo taona, mipetraka eny Andohantapenaka. Olona tsy fantatra no nanindrona antsy azy. Ankona ny fianakaviana rehetra, indrindra ny reniny izay mipetraka any ampitan-dranomasina. Nindaosin’ny fahafatesana ilay vavitokana.
Nody hariva avy nirava niasa ity vehivavy no niharam-boina teny an-dalana, tamin’ny harivan’ny alarobia 25 septambra lasa teo. Tsy lavitry ny trano fonenany no nisehoan’ny loza. Nitsitra nihoson-dra teo amin’ny sisin-dalana izy rehefa avy nisy nanindrona tamin’ny antsy. Izy efa nidaboka teo amin’ny tany no hitan’ny olona.
Nentina haingana teny amin’ny hopitalyJoseph Ravoahangy Andrianavalona ( HJRA) Ampefiloha ilay maratra. Tsy tana ny ainy, ny ampitso (alakamisy 26 septambra) tamin’ny dimy ora maraina. Tsy nisy kosa ny zavatra voaroba teny aminy. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny fanadihadiana sy ny fikarohana an’ireo nahavanon-doza.
Tonga hariva teny Andohantapenaka avy niasa Ramasiarimanana Sheena, tamin’ny alarobia 25 septambra. Efa mahazatra azy ny tafody alina tahaka izany. Niala ny taksibe nandehanany izy ary nandeha irery. Tsy nisy nahatsikaritra ny tena zavatra nahazo azy. Izy efa nihoson-dra teo amin’ny tany no hitan’ny olona teo amin’ny manodidina. Nisy dian’antsy teo amin’ny foto-tsandriny tandrify ny fony. Niboiboika ny ra.
«Tsy nisy nahita ny zava-niseho izahay fianakaviana. Izy efa voa sy nentina tany tamin’ny hopitaly no noraisinay. Tsy mbola misy sahy mijoro vavolombelona mitantara ny zava-nitranga marina ny olona teo amin’ny manodidina izay mety ho nahita ny zavatra rehetra. Ny fantatra fotsiny dia hoe lehilahy telo no namono azy», hoy Rafaralahy Andriamampianina, dadatoan’i Sheena.
Vehivavy iray fianakaviana ihany, izay nandalo tsy lavitra ny toerana nisehoan’ny voina no naheno sy nitondra haingana an’ilay naratra teny amin’ny hopitaly. Tetsy an-daniny, tsy nahatsiaro tena i Sheena. Tsy tafaresaka tamin’ny fianakaviana intsony izy.
Niala nenina tamin’ny fikarakarana azy ny mpitsabo teny amin’ny Hjra. Indrisy, tsy tana ny ainy, ora maromaro taorian’izay. Noho ny fahaverezan-dra be loatra vokatr’io tsindron’antsy io no heverina ho nitarika ny fahafatesany.
Fanendahana sa vono niniana natao?
Toerana be olona mivezivezy saingy maizina noho ny tsy fisian’ny jiro amin’ny andrin-jiro io toerana nisehoan’ny herisetra io. Voalaza fa matetika ny fanendahana miseho eo. Faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana, indrindra ny fanendahana iny faritra iny. Voalaza anefa fa tsy matetika ny fisiana tsindron’antsy tahaka izao.
Nihevitra avy hatrany ny olona sy ny fianakaviana fa mety ho novonoin’ny mpanendaka i Sheena. «Mbola teny am-bozonany ny paoketrany. Tsy nisy very ny vola sy ny finday teny aminy. Nisy faritra mangana kosa ny vozony. Tokony ho azon’ireo olon-dratsy ireo zavatra ireo raha tena fanendahana tokoa no niseho», hoy ny fianakaviana. Ankoatra izay, nilaza ny polisy fa tombanana ho zavatra hafa no antony nahatonga ny vono fa tsy fanendahana velively. Andrasana ny valin’ny fanadihadiana.
Tsy nitsahatra nifampiantso an-telefaonina ny fianakaviana rehetra noho io voina tampoka nahazo an-dRamasiarimanana Sheena io. Mipetraka any Frantsa ny reniny, Razanamasy Vololona. Tsy niara-mipetraka taminy kosa ny rainy, Andriamanjaka Mamitiana. Tebiteby no niainan’ny fianakaviana raha mbola nokarakarain’ny mpitsabo teny amin’ny hopitaly ilay vehivavy.
«Nankeny amin’ny hopitaly avy hatrany aho rehefa naheno ny vaovao ratsy. Saika voaendaka aho teny an-dalana sady nandeha alina, tamin’io fotoana io. Hitako i Sheena sy ny ratra nahazo azy. Tsy nanana fanantenana intsony aho. Efa tena kivy tanteraka aho. Maty ny zanako, fotoana vitsy taorian’izay», hoy Andriamanjaka Mamitiana, rain’i Sheena, mitantara amin’alahelo ny zavatra niainany tamin’ny fahitana an-janany niharam-boina.
«Niantso ahy ny fianakaviana taty Antananarivo, tamin’io harivan’ny alarobia io. Gaga sy taitra aho naheno fa hoe nisy nanindrona antsy ny zanako ka nalefa eny amin’ny hopitaly. Nieritreritra avy hatrany aho fa mety tsy haninona izy satria efa eny amin’ny hopitaly sady eo amin’ny foto-tsandriny no voa. Niantso an-telefaonina foana aho nanontany ny tohin’ny vaovao. Tsy nitsahatra nivavaka ihany koa anefa. Niantso farany aho tamin’ny sasak’alina. Henoko fa mbola mitohy ny fikarakarana ataon’ny dokotera », hoy kosa Razanamasy Vololona, reniny.
Fitaintaina no niainan’ity renim-pianakaviana ity tany ampitan-dranomasina noho ny voina nahazo an-janany vavitokana. «Tany am-piasana aho, ny maraina, no nisy niantso indray. Maty ny zanako. Nanomboka nitomany aho. Tsy nampoiziko », hoy ihany izy nitantara tamin-dranomaso.
Lavitra ray aman-dreny
Fony mbola ankizy Ramasiarimanana Sheena no nisara-toerana ny ray aman-dreniny. Vavitokana zanaka nikambanan’izy ireo raha efa samy nanan-janaka avy iretsy farany taty aoriana. Ny rahavavin-dreniny no nitaiza sy nipetrahan’i Sheena, teny Andohantapenaka, rehefa nipetraka any Frantsa ny mamany.
Nifanerasera taminy ihany koa ny fianakaviana rehetra. Tsy mitsahatra mifandray amin’ny ray aman-dreniny anefa izy, nandritra izay fotoana izay.
Tamin’ny taona 2018 no nifakahitany tamin’ny reniny farany. Nifampiantso an-telefaonina sisa no natao. «Tamin’ny alatsinainy mialoha an’io talata nisehoan’ny loza io no niresahanay sy nifampiantsoanay mianaka farany. Tokony hiantso azy aho ny talata. Tsy vita izany. Ny vaovao ratsy no henoko », araka ny nambaran-dRazanamasy Vololona.
Tapa-bolana lasa koa izay no nihaona velona farany tamin’ny rainy i Sheena, nandritra ny lanonam-panambadiana natrehan’izy ireo.
Olona tsotra, tsy manam-pahavalo
Vehivavy tsotra, tia mifandray aman’olona ary tena tia zaza Ramasiarimanana Sheena, fony fahavelony. Mahafantatra azy ny ankamaroan’ny olona eny Andohantapenaka indrindra ny mpiara-monina aminy.
«Tsy dia mifankahita matetika izahay roa vavy noho ny asany. Tamin’ny alahady nitsingerenan’ny taona nahaterahany, no nahitako azy farany », hoy Rafanomezantsoa Achille, zanaky ny iray tampo amin’ny ray aman-drenin’i Sheena, izay toy ny rahavaviny sady mpiray vodirindrina aminy.
«Olona tsotra, tsy tokony hanana fahavalo i Sheena. Ny any ambadika sy ny olana eo aminy anefa no tsy fantatray izay mety ho antony nahatonga ny famonoana azy », hoy kosa Rafaralahy Andriamampianina, dadatoany.
«Tsy mbola nitantara olana goavana tamiko io zanako io, fony fahavelony », araka ny voalazan’ny reniny.
Ontsa tanteraka ny fianakaviana nanoloana ity hetraketraka namoizana ny ain-dRamasiarimanana Sheena ity. Mampandre sy miangav ny tompon’andraikitra izy mba hijery akaiky ny tsy fandriampahalemana hisorohana ny tranga hafa. Maniry ihany koa izy ireo ny mba hahitana ny marina sy ny rariny tamin’ity raharaha ity. Ankinina amin’ny manampahefana voakasika izany ny fanadihadiana rehetra.
Korontana teny an-dalana :: Mpandeha taksiborosy iray nahafaty sy nandratra mpandeha hafa
Lozam-pifamoivoizana :: Tovovavy maty voahitsaky ny kamiao